Shabakada wararka ee Al-Jazeera oo Jimcihii u dabaaldegtay sanad guuradeedii 23aad… – Hagaag.com
Shabakada wararka ee Al-Jazeera oo Jimcihii u dabaaldegtay sanad guuradeedii 23aad…
Shabakadda Wararka ee Al Jazeera ayaa waxay u dabaal degtay sannad-guuradeedii 23-aad Jimcihii oo cinwaan looga dhigay “Kalsoonida dib u cusbooneysiiyay cahdigeeda”, iyada oo dib loogu xasuusto marxaladihii horumarineed ee aasaaska bilowgeeda maanta oo kale ee sanadkii 1996, oo lagu bilaabay kanaal telefiishan oo wararka ah oo la baahin jiray wax aan ka badneyn lix saacadood.
Agaasimaha Shabakada Al-Jazeera Sheikh Hamad bin Thamer Al-Thani ayaa wuxuu caddeeyey baahida dadka ay u qabeen duruufahaas xasaasiga ahaa inay helaan warbaahin miyir-qabta oo ballaarisa wacyiga iyo kor u qaadista wacyiga murannada iyo baahinta dhaqanka wadahadalka, fikirka iyo ra’yiga kale.
Dhiniciisa, Ku-simaha Agaasimaha Guud ee Shabakadda Mustafa Sawak ayaa sheegay in Al-Jazeera ay ku guuleysatay inay ka gudubto caqabadihii ku hor gudbanaa wajigeeda, gaar ahaan waddammada ku soo rogay go’doonka, iyadoo loogu mahadcelinaya aqoonteeda iyo ballaarinteeda.
Agaasimaha Guud ee al-Jazeera Ahmed al-Yafi ayaa sheegay in kuwa hareereeyay ereyga xorta ah ay abaabuleen ololayaal ay ku kicinayaan kanaalka, laakiin wey ku guuldaraysteen in ay sidaas sameeyaan, xataa waxaa kordhay tirada dadka daawada television-ka ee dowladaha go’doominta laftooda.
Al Jazeera waxay isu rogtay shabakad shan kanaal telefishan ah, iyo sidoo kale Al Jazeera Net iyo qeybo badan oo dijitaal ah, marka lagu daro Machadka Warbaahinta ee al- Jazeera, Xarunta Daraasaadka Al Jazeera, iyo Xarunta Al Jazeera ee Xoriyaddaha guud iyo Xuquuqda Aadanaha.
Al-Jazeera, inta ay ku guda jirtay howlaheeda in ka badan labaatan sano, waxay dooneysay inay iftiimiso arrimaha bini’aadamka iyo walaacyadiisa, in kasta oo ay jirto dhibaatayn joogto ah iyo isku dey in la aamusiyo.